Amazwe amaninzi anqumamisa iinqwelomoya zamazwe ngamazwe ngaphezulu kwe-COVID-19 eyahlukileyo
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Amazwe amaninzi anqumamisa iinqwelomoya zamazwe ngamazwe ngaphezulu kwe-COVID-19 eyahlukileyo
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • abantu • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku
Umbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO) uthi inani elikhulu leenguqu kolu tshintsho lusanda kufunyanwa luphakamisa inkxalabo enkulu malunga nokuba luza kuba nefuthe njani kuxilongo, kunyango kunye nogonyo.
IKhomishini yaseYurophu (EC) uMongameli u-Ursula von der Leyen, namhlanje, ucele ngokukhawuleza ukuba konke ukuhamba ngenqwelomoya ukuya nokubuya kumazwe anamatyala axeliweyo ohlobo olutsha lwe-COVID-19 ukuba kurhoxiswe de urhulumente kunye namagosa ezempilo abe nokuqonda ngcono umngcipheko omtsha. Umehluko wentsholongwane.
IDenmark, iMorocco, iiPhilippines kunye neSpain zibe zezona zizwe zamva nje zokumisela izithintelo zokuhamba kuzo zonke iindawo ezingabalulekanga zokuhamba.o UMzantsi Afrika kunye namazwe angabamelwane, ukujoyina uluhlu olukhulayo lwamazwe anemithintelo ngaphezulu kwe-'super mutant' yoxinzelelo lwe-COVID-19.
The udibano lwaseyurophuIsibhengezo seza emva kokuba iDenmark kunye neSpain zimanye amazwe aseYurophu ekunciphiseni uhambo oluya kulo mmandla, ngelixa, kumazwe ngamazwe, iMorocco kunye nePhilippines zathatha amanyathelo afanayo okuthintela intshukumo kwiqela lamazwe athathwa njengomngcipheko.
IJamani ibhengeze Mzantsi Afrika "indawo eyahlukileyo yentsholongwane," utshilo umphathiswa wezempilo welizwe uJens Spahn kuTwitter. Kuthetha ukuba "iinqwelomoya ziya kuvunyelwa kuphela ukuthutha amaJamani" ukusuka elizweni.
Bonke abafikayo kuya kufuneka babekwe bodwa kangangeentsuku ezili-14, nokuba bagonyelwe ngokupheleleyo kwi-COVID-19 okanye sele bepholile, wongeze watsho uSpahn.
Abasemagunyeni baseDatshi benza inyathelo elifanayo, bebhengeza ukuvalwa kweenqwelomoya ukusuka eMzantsi Afrika ukuya eNetherlands ukusuka ezinzulwini zobusuku.
I-Itali kunye neRiphabhlikhi yaseCzech nazo zakhawuleza ukulandela ezinye izizwe zaseYurophu ekubekeni izithintelo.
I-Rome iye yakuvala ukungena kubo bonke abafikayo abavela eMzantsi Afrika, eLesotho, eBotswana, eZimbabwe, eMozambique, eNamibia nase-Eswatini. IPrague ikwathe abantu abangengabo abemi beli lizwe abasandul' ukutyelela eMzantsi Afrika abasayi kuvunyelwa ukuba bangene eCzechia.
Emva kwemini, iFransi yathi imisa iinqwelomoya ezisuka kumazantsi e-Afrika kangangeeyure ezingama-48 ubuncinci, uMphathiswa wezeMpilo u-Olivier Veran ebhengeza ukuba bonke abo basandul' ukufika bevela kulo mmandla baza kuvavanywa kwaye babekwe iliso elibukhali.
Inkulumbuso yaseFransi uJean Castex udize ukuba iingxoxo phakathi kweenkokheli ze-EU malunga nendlela yokuphendula kolu hlobo lutsha, olungekafunyaniswa okwangoku kwilizwekazi, luza kwenzeka "kwiiyure ezizayo".
The I-World Health Organization (WHO) ithi inani elikhulu leenguqu kwinguqu entsha efunyenweyo iphakamisa inkxalabo enkulu malunga nokuba iya kuba nefuthe njani kuxilongo, unyango kunye nogonyo.
I-UK ikwathintele ukuhamba ngenqwelomoya ukuya nokubuya eMzantsi Afrika kunye nabamelwane bayo, kunye ne-Arhente yoKhuseleko lwezeMpilo yelizwe isithi "lo lolona hlobo lubi silubonileyo ukuza kuthi ga ngoku."
Amazwe angaphaya kweYurophu nawo anexhala malunga nokwahluka okutsha, kunye neMalaysia, iJapan, iSingapore kunye neBahrain zibeka izithintelo kubahambi abavela kumazantsi eAfrika.
Sirayeli kwakhona ubeke ban abafikayo ukusuka emazantsi e-Afrika kodwa emva koko yandisa 'indawo ebomvu' phantse kwilizwekazi lonke, ngaphandle nje kwamazwe athile akumntla-Afrika.